Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Boeing 777X dia tonga any Dubai amin'ny 2021 Dubai Airshow
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany UAE • Etazonia Vaovao Vaovao
Boeing 777X dia tonga any Dubai amin'ny 2021 Dubai Airshow.
Ny Boeing 777-9 fiaramanidina fitsapana sidina dia manao ny voalohany iraisam-pirenena, manidina tsy an-kiato avy any Seattle mankany Emira Arabo Mitambatra.
Boeing 777X dia haseho ao amin'ny Dubai Airshow manomboka ny 14 Novambra 2021.
Miorina amin'ny tsara indrindra amin'ny fianakaviana 777 sy 787 Dreamliner, ny 777-9 no ho fiaramanidina kambana lehibe indrindra sy mahomby indrindra eran-tany.
Ny fianakaviana 777X dia manana baiko sy fanoloran-tena miisa 351 avy amin'ny mpanjifa lehibe valo eran'izao tontolo izao.
Tonga ny Boeing 777X vaovao Dubai World Central amin'ny 14:02 pm (GST) anio, mialoha ny Dubai Airshow ho avy. Ny fiaramanidina dia hatao amin'ny fampisehoana static ary aseho amin'ny fandaharana manidina amin'ny fampisehoana manomboka ny 14 Novambra.
Ny fiaramanidina fitsapana sidina 777-9 dia nanao sidina tsy an-kiato efa ho 15 ora avy any Seattle. Boeing saha mankany Dubai, ny sidina iraisam-pirenena voalohany sy ny sidina lava indrindra hatramin'izao ho an'ny 777X raha mbola mitohy ny fandaharam-panadinana henjana.
Miorina amin'ny tsara indrindra amin'ny fianakaviana 777 sy 787 Dreamliner, ny 777-9 dia ho fiaramanidina motera kambana lehibe indrindra sy mahomby indrindra eran-tany, manome 10% tsara kokoa ny fampiasana solika, ny famoahana ary ny fandaniana amin'ny asa noho ny fifaninanana ary mpandeha miavaka. traikefa. Ny fianakaviana 777X dia manana baiko sy fanoloran-tena miisa 351 avy amin'ny mpanjifa lehibe valo eran-tany. Ny fanaterana voalohany ny fiaramanidina dia andrasana amin'ny faran'ny taona 2023.
Boeing mamolavola, manamboatra ary manolotra fiaramanidina ara-barotra, vokatra fiarovana ary rafitra habakabaka ho an'ny mpanjifa any amin'ny firenena 150 mahery. Amin'ny maha-mpanaondrana ambony any Etazonia azy, ny orinasa dia mampiasa ny talentan'ny toby mpamatsy eran-tany mba hampandrosoana ny toekarena, ny faharetana ary ny fiantraikan'ny fiarahamonina. Ny ekipan'ny Boeing isan-karazany dia manolo-tena amin'ny fanavaozana ho an'ny ho avy sy hiaina ny soatoavina fototry ny orinasa momba ny fiarovana, ny kalitao ary ny fahamendrehana.
Dan Pimental Strategy hoy:
November 14, 2021 amin'ny 05: 18
Misaotra tamin'ny lahatsoratra mahafinaritra. Tena nahafinaritra ahy ny namaky ity lahatsoratra ity mba hikaroka manoratra ity lahatsoratra tena tsara ity sy lahatsoratra mahasoa misaotra amin'ny fizarana. Tsidiho ity lisitr'ireo lahatsoratra sy lahatsoratra mahaliana momba ny lohahevitra toy ny fahasalamana, fahasambarana, vokatra ary maro hafa.